Tsy feno ny karaman’ireo mpampianatra sy mpandraharana ho an’ny volana aprily, indrindra fa ny sekoly tsy miankina. Tsy feno ny karama omen’ny raiamandreny ireo mpampianatra efa tsy misitraka “subvention”. Tapaka ny karaman’ireo FRAM voaray ho mpiasam-panjakana. Misy ny fangalana vola eny anivon’ny sekoly tsy miankina ataon’ireo CISCO sasany na efa tsy voaloa aza ny karaman’ireo mpiasa amin’ireny. Mangataka fandaminana ny toe-javatra samihafa izay ahafahana manatanteraka ny taom-pianarana izy ireo, toy ny fiarovana sy fiambenana azo antoka ny sekoly. Jerena manonokana volan’ny rano sy ny herinanaratra. Kendrena ho madio sy voaaro ny fotondrafitrasa rehetra mialohan’ny hiverenana. Manomana kitapom-bola hanohanana ny dingana fanarenana, fametrahana ny mpiasa mpanolon-tsaina isaky ny ZAP. Mangataka ny hananganana komity vonjimaika: sendikan’ny mpiasa, firaisamonim-pirenena, Fanjakana, vondron’ny sekoly tsy miankina handinika ny vahaolana. Tokony henjanina ny fampidirana FRAM eny anivon’ny sekoly mba tsy ho baranahiny, efa nampiditra mpampianatra FRAM 50 000 ho mpiasam-panjakana isika anefa dia niaka ho 25 000 indray, hoy ny CONAMEPT.